I-Garden callas - ukutshala nokunyamekela
Ukunyuka kwe-callas yegadi kuqhutyelwa, ngokuyisiseko, kwiigadi zasebusika kunye namagumbi. Nangona kunjalo, nakwiindawo ezivulekileyo zomda welizwe lethu, ezi ntyatyambo ezinokuthi zivale ukuba zibonelelwa ngononophelo olufanelekileyo.
Zininzi iintlobo ze-callas, kodwa eziqhelekileyo kwilizwe lethu nguClala aethiopica L., iZantedeshia aethiopica Spreng okanye uCalla waseTopiya. Amagqabango ayo awona monochrome, aphezulu, anama-petioles ende. Zonke iikratshi ze-inflorescence ezimhlophe ezimhlophe zekhephu zilele kwiphepha le-cob.
Imizamo ephumelelayo ekuveliseni nasekuhlaleni i-calliams yaseTopiya evulekileyo yabangela ukuba abalimi baqala ukupapa ezinye iintlobo ezimbini zezi zityalo - i-Zantehedchia ka-Elliott noZantedeschia kaRemani. Eyokuqala inamaqabunga entliziyo enemibala emhlophe kunye ne-inflorescence eluhlaza okwesibhakabhaka, kunye ne-second-inflorescence yazo zonke i-shades ze-lila, i-pink kunye nobomvu. Ngethuba lexesha eliphumayo, ezi ntlobo zekhalli zishiya amaqabunga, ngokunjalo ubusika bubekezelela ngokukhuselekileyo.
Iimeko ezifanelekileyo zokukhula khallas
Ezi ntyatyambo zikhetha indawo zelanga ne-stable microclimate. Isithunzi esivulwayo siyafaneleka. Into ephambili kukukhusela iiprojekti. Umyezo ovundiweyo womyezo we-callas ufanelekile, kodwa ngomxholo ophezulu wezinto eziphilayo kuwo, ukuchuma kweentyantyambo kunganciphisa, ngoko umhlaba kufuneka ulungiswe ngesanti kunye ne-peat, uguqule ube yi-loam elula.
Ngelishwa, ukuveliswa kwe-calla kunye nembewu kungeke kwenzeke, ekubeni ukuhluma kwembewu, kwaye emva koko ukutshala ukukhula, kudinga ixesha elingakumbi kunokuba isimo sezulu sasemakhaya sivumele. Ngama-tubers, iingxaki ezinjalo azivuki. Ngoko, ukutshala i-callas entwasahlobo kudla ngokuqhutywa kwimihla yokuqala kaMeyi kumhlaba ofudumalayo kwi-5-10 cm centimeters. Kuxhomekeke kububanzi be-tuber - enkulu kakhulu, kubaluleke kakhulu ukuyibeka emhlabathini. Emva kokutshala i-callas emhlabathini, kufuneka kuphuziswa ngokubanzi.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kwiindawo ezisemakhaya zivame ukuthengisa izinto zokutyala zangaphandle. Ezi zityalo ziya kulungelelanisa iminyaka emininzi kwiimeko zethu. Ukuba unethuba lokuthenga izilimo eziyizigaxa ezikhulile kwiindawo zethu zokufunda, zikhethele zona.
Esi sityalo siphakathi kokungathobeli, ngoko ukutyala, kunye nokunyamekela i-garden calla ingxaki ayiyi kubangela. Imeko ebalulekileyo kuphela ininzi yokutyisa kwimozulu eshushu. Ukuze kuphuculwe ngcono, i-callas inokutya kunye nezichumisi ngexesha lokukhula. Izifo kunye neentsholongwane zikhetha ukunqumla le ndawo. Ngezinye izikhathi i-calla idonsa i- whiteflies , kodwa ayibangeli ubungozi obukhulu.
Iibhubhe: ukuthungwa nokugcinwa
NgoSeptemba, ngaphambi kokuba utshintshwe i-callas, sele sele isele iphelile, kufuneka uchithe ngobumnene isabelo somhlaba sezityalo. Iibhubhu, ukuhlukana okuhlukileyo, phatha ngokucophelela emhlabathini! Emva koko ii-tubers zihlanjwe kwaye zifakwa kwindawo epholileyo iiveki ezimbini. Oku Kuyimfuneko ukuba intsalela yesitshixo ibe yomile kwaye ihluke kalula kwi-tuber.
Emva koko, ii-tubers zingagcinwa kwifriji, zifakwe kwiibhegi zephepha. Ukuba kukho ezininzi izilimo eziyizigaxa kwaye azikho indawo ezaneleyo kwiqrijini, unako ukugoba iindidi eziliqela zephephandaba uze uyigcine kwibhokisi lebhodibhodi kwindawo epholileyo.
Kwakungenakwenzeka ukuqinisekisa ukuba i-tubers ipholile kwaye iyomile, kwaye ihlume ngaphambi kwexesha? Akunandaba! Zifanele zityalwe kwiimbiza, kunye nokuvela kweentlobo eziphathwe nge-ferrovite. Ngaphambi kwezihluma kufuneka zijongwe njengendlela evamile yegadi ye-callas, oko kukuthi, ukubonelela nokunyusa. NgoMeyi kufuneka batyathelwe emhlabathini. Baya kutyhutyha, kodwa kungenjalo.
Violets - ukutyala nokunyamekela ekhaya
IGeranium - amaqabunga owomileyo - yintoni oyenzayo?
I-Adenium evela kwimbewu ekhaya
Ukulwa nezilwanyana zonyango
I-Dahlias yonyaka - ukutyala nokunyamekela, iimfihlelo zokulima
Iintyatyambo ze-hazel umzala - ukutyala nokunyamekela
Ukulungiselela i-gladioli ebusika
Ungondla njani ipayari ekuwa?
Ukulwa ne-weevil kwi-strawberries
Izinto zokuhlobisa izicwangciso
U-Erickson's hypnosis - yintoni, imigaqo-siseko, iindlela kunye nobuchule
Igumbi lokulala kwigumbi lesiNgesi
Ukuphakamisa amasango ngezandla zakho
Umntwana unesifo sezinyo
Iingcango zangaphakathi zeglasi
AmaJeans kubafazi abapheleleyo
Iingcamango zokufotela intombazana kwintombazana
Indlela yokwenza ukuphuhliswa kwindlu?
Igadi yaseBotanical, iMinsk
Iintlanzi zexesha lokuzalwa
Ukungondleki ngexesha lokukhulelwa - iiveki ezingama-20
Imithwalo yemitshato yomtshato 2016
I-Oregano - iimpawu zonyango kunye nesicelo kumachiza omntu
I-chocolate-fondant-recipes ye-dessert yaseFrench engafaniyo
Isixhobo sokuphunga umchamo wekati
Ijuba leentshontshi ebhaleni - uphawu
Iitera zeCeramic ekhitshini
Iiklasi zabafundi besikolo
Umsuka we-dogrose - izakhiwo ezixhamlayo kunye nokuchasene